ငါဘယ်တော့မှ၊ ဘယ်တော့မှအိမ်ထောင်ပြုမှာလဲ - သတင်း
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်စာရင်းအင်းများအရလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှုန်းကျဆင်းသွားပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားသူများမှာမူထိုသို့ပြုရန် ပို၍ ပင်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ အခုဆိုရင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး လက်ထပ်ထိမ်းမြားသောပျမ်းမျှအသက်မှာ ၃၄ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသားများအတွက်မူအသက် ၃၆ နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းကြောင့်နည်းနည်းသက်သာရာရသော်လည်းမခံစားရနိုင်တော့ပါ။
ငါ ၆ နှစ်တုန်းကဆရာတစ်ယောက်ကကျွန်မတို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားတုန်းကကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်အသက်အရွယ်မှာဖြစ်မယ်လို့ထင်သလဲ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ရှိပြီးအိုမင်းခြင်းသဘောတရားအရ ၃၅ နှစ်ကျော်သူတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သင်္ချိုင်းမှမိနစ်အနည်းငယ်သာကြာသည်ဆိုသောအဖြေများသည်အတော်အတန်ကွဲပြားသည်။ အကြှနျုပျ၏တစ်နှစ်6ရည်းစားဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်ထွက်အလုပ်လုပ်မဟုတ်ဘူးပထမ ဦး ဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သင့်သော 17, ဖြေသည်။ ငါအခြားတစ်ဖက်တွင်, ဘယ်တော့မှဖြေသည်။ ထိုမေးခွန်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏အဖြေမှာယခင်ကမရှိသေးသော်လည်းလက်ထပ်ရန်ဆန္ဒမရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ယောက်ျားများသည်ယောက်ျားလေးများသာဖြစ်သည်ဟုထင်ခြင်းထက် ပို၍ ပျော့ပြောင်းနေသည်။
ပထမ ဦး စွာ၎င်းသည်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ ငါအကြွေး ၅၀ နီးပါးရှိတဲ့အကြွေး ၅၀ နဲ့ဘွဲ့ရတော့မယ်။ ငါဖြစ်ကောင်းအိမ်တစ်အိမ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါတတ်နိုင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်, ငါသည်ငါ့နိုင်ငံရေးဒီဂရီငါ့ကိုဘာမှရှာဖွေတာခံရဖို့မထင်ထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမက်ဒေါ်နယ်ရဲ့မှာငါ့နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခအလုပ်ပြန်သွားဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ပို။ ပို။ စိုးရိမ်နေကြဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ပျမ်းမျှမင်္ဂလာဆောင်£ 20k ​​န်းကျင်ကုန်ကျသည်။ စိတ်မကောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုဤငွေရှာဖွေရန်မည်သည့်နေရာတွင်မျှော်လင့်သနည်း။ ငါဇီဝဗေဒမှာဒီနေ့လွတ်သွားပြီးမင်းရဲ့မြည်းမှပိုက်ဆံဘယ်လိုထုတ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့ရှင်းပြခဲ့တယ်။ ဒါကအဖြစ်ဝေးငါစိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်အဖြစ်aရာမငွေပမာဏဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျ 20 ခမ်းနားသေးငွေသားသည်အဘယ်သူကိုအဘို့လူတစ် ဦး အမျိုးအစားလျှင်သင်ဒီတစ်ခါလည်း, ဒါကြောင့်အများကြီးထင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ငါပဲကအပြစ်လွတ်လို့မရပါဘူး။ အကယ်၍ ထိုငွေသည်သင်၏ဘဝ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူခရီးသွားခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်ငွေစုဆောင်းခြင်းအတွက်ပိုမိုအသုံး ၀ င်မည်မှာသေချာသည်။ သို့မဟုတ်ဖွယ်ရှိသည်မှာသင်၏လန်ဒန်မြို့ရှိငှားရမ်းခအတွက်တစ်နှစ်ငှားရမ်းရန်ရှိပြီးကျန်ရှိနေသေးသောဖရက်ဒ်ကိုသုံးရန်ငွေအလုံအလောက်ရှိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဈေးပေါပေါနဲ့လုပ်နိုင်တာကိုသင်ငြင်းနိုင်မယ်။ မှတ်ပုံတင်ရုံးသို့သွားပါ၊ သင်၏ဘားဘောလုံးဝတ်စုံကိုပြန်လည်သုံးပါ၊ အရက်ဆိုင်ထဲသို့ reception ည့်ခံပါ၊ ဖွင့်ထားသောဘားကိုမပေးပါ။ ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး စွာ: ဘယ်သူဖွင့်ဘားမပါဘဲမင်္ဂလာဆောင်ကိုသွားချင်? နှင့်ဒုတိယအ, ကုန်ကျစရိတ်ငါအစဉ်အမြဲငါအတန်းမှာတက်လမ်းလျှောက်မည်မဟုတ်ပါအဘယ်ကြောင့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘူး။
ငါအဆိုးမြင်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်, လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ 50 ရာခိုင်နှုန်းကလေးသာမှုကတိကဝတ်မဟုတ်သောကွာရှင်း, အဆုံးသတ်ပေမယ့်ငါရိုးရိုးသားသားချစ်ခြင်းမေတ္တာယုံကြည်ပါတယ်။ ငါတကယ်တော့တစ် ဦး ကိစ္စသကဲ့သို့, အခုအချိန်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်၏။ (ထိုအခါငါ့ရည်းစားအဘယ်သူမျှမလက်ထပ်ထိမ်းမြားအရာနှင့်ပတ်သက်။ သဘောတူညီချက်၌တည်ရှိ၏, ဒါကြောင့်သူကဒီကိုဖတ်ပါပြီးတော့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းလက်စွပ်ပြန်လာရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ပူပန်စရာရှိပါတယ်။ ) ငါအောင်မြင်သောလက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုမြင်ငါလက်ထပ်ထုံးတမ်းပြိုလဲမြင်ကြပြီ။ တသက်လုံးတည်မြဲသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာရုံပျောက်ကွယ်သွားမြင်ကြပြီ။ ဒါပေမယ့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအစစ်အမှန်ကြောင်းငါ့ထံသို့နေဆဲ, ထိုသို့မှန်ကန်သောအခါ, ကအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။
သို့သော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားလဲလှယ်နိုင်သောအသုံးအနှုန်းများမဟုတ်ပါ။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအခြားမရှိဘဲတည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းသည်ချာ့ချ် (သို့) ဥပဒေအရပြည်ထောင်စုတစ်ခုအဖြစ်အတည်ပြုရန်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။ (ဒါမှမဟုတ်မင်းတကယ်ဝေးဝေးကိုပြန်သွားချင်ရင်မင်းကသမီးကိုရောင်းဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ။ Ah, the patriarchy) ငါသူတို့အားနှစ်ခုအဖွဲ့အစည်းများတစ်ခုခုကိုမှသတ္တုတွင်းအရာရှိတ ဦး ကမဆိုဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်စေမဆိုအကြောင်းပြချက်မမြင်မိပါဘူး။
ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်တယ်၊ ဒါတွေကိုသင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုလို့သင်မြင်ရင်ငါလေးစားတယ်၊ နားလည်တယ်။ ငါဘယ်မှာငါစိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်: ဘုရားကျောင်း? ကောင်းပြီ, ငါဘုရားမဲ့ဝါဒီပေါ့နှင့် Gavin နှင့် Stacy ထံမှဟာသခိုးယူရန်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုအထဲမှာရလိမ့်မယ်တစ်ခုတည်းသောဘုရားကျောင်း Charlotte * ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေ? ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါပညတ်တရား၏မျက်မှောက်၌ငါ့ဆက်ဆံရေးကိုတရားဝင်အောင်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်အဘယျသို့ပြောင်းလဲမှုများမမြင်ရ။ အိုကေ၊ မင်းမှာအခွန်သက်သာခွင့်တွေအများကြီးရတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါ Tory ဟာဘယ်လိုမျိုးလဲ။ ဆက်သွယ်မှုတစ်ခု၏လုံခြုံရေးသည်သမဂ္ဂအားတရားဝင်ဖြစ်စေခြင်းမှစာရွက်တစ်ရွက်မှပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းမှလာသည်။ တကယ်တော့အရာဝတ္ထုတွေပြgoနာတက်ရင်ပိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒီလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အတော်လေးရှေးကသြောအမြင်များဖြစ်ကြသည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းသည်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆင်နွှဲခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းစွာကတိကဝတ်ပြုခြင်းကိုပြလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အများစုကယခုပြောလိမ့်မည်။ ထိုအခါငါဒီလိုလုပ်ချင်တဲ့အတွက်မည်သူမဆိုခေါက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါဟာရဲရင့်ခြင်းနှင့်အထူးနှင့်ငရဲအဖြစ်ချစ်စရာပါပဲ။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေမှာအရက်မူးနေဖို့ငါ့အသက် ၃၀ လောက်သုံးဖို့တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသီးသန့်ကျင်းပလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ငါရင်ခုန်စရာလူတစ် ဦး မဟုတ်ပါဘူး, ငါချစ်ခင်၏ကြီးမားသောပြသမှုမကြိုက်ဘူး။ ငါဒီမှာအထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုမလိုချင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ကျွန်ုပ်သည်သင့်ကိုတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးတွင်လုံခြုံမှုရှိပြီးပျော်ရွှင်မှုခံစားရရန်လိုအပ်သည့်နက်ရှိုင်းသောကတိက ၀ တ်ဖြစ်သည်။
ထိုအခါသင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးလိုက်တယ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မင်္ဂလာဆောင်ပစ္စည်းပစ္စယရှိပါတယ်။ အစမ်းလေ့ကျင့်ညစာ, မင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်စျေးဝယ်ခြင်း, မင်္ဂလာဆောင်အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာနှင့်အတူတက်လာ, THE စားဆင်ယင်ရှာဖွေတာ, ပန်းအစီအစဉ်များကောက်ယူ, တရားဝင်ကခုန်, မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်ကြားချက်ကို (သင် Facebook ကိုဖြစ်ရပ်ရုံလုပ်လို့မရဘူးကြောင့်), ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါကပဲစဉ်းစားမောကုန်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာကမျှကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ ၏အကောင်းဆုံးသောနေ့တစ်နေ့မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသော charade ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ငါ Caitlin Moran ကိုးကား၏သတိပေးနေပါတယ်: သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့ကသူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ကပြောပါတယ်သူမည်သူမဆိုရုံ 3am မှာလယ်၌အလုံအလောက် MDMA ပြုမိပါဘူး။ သူမမမှားဘူး
ငါလက်ထပ်ရန်မလိုချင်ဘို့ငါအကြောင်းပြချက်ဒီပင်ငါလိုသောမဟုတ်များအတွက်ရှိသည်အားလုံးအမျိုးသမီးရေးအကြောင်းပြချက်အပေါ်ခြစ်မထားပါဘူးအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးတောင်မှပြောနိုင်သေးတယ်၊ မင်းကအသက်ကြီးလာရင်ဒါမှမဟုတ်မင်းမိန်းကလေးအားလုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့အိပ်မက်မက်လာရင်ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့စိတ်ဆင်းရဲသွားလိမ့်မယ်။ ကျနော့်အမေလိုပဲလက်မထပ်ရသေးတဲ့ကျနော့်ရွေးချယ်မှုကြောင့်အရမ်းဝမ်းနည်းကြေကွဲရလိမ့်မယ်။ (ငါသူမကိုမေးတယ်: သူမအသက်ရှင်လိမ့်မယ်ဟုပြောသည်) ။ ၎င်းသည်မိန်းမအားလုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုသောစကားမပြောနိုင်သောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကိုအနည်းဆုံးပြောရန်အားပေးခြင်းဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါဟုအကြံပြုသည်။
* ဟုတ်တယ်၊ ငါဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်သဖြင့်ဤဟာသသည်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ဆဲဖြစ်သည်။